Italy Juventus oo dhaqaale ahaan ugu sarreysa iyo Milan oo dhacday | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Italy Juventus oo dhaqaale ahaan ugu sarreysa iyo Milan oo dhacday
Juventus ayaa weli ah kooxda horyaalka Serie A ee dhaqaalaha ugu badan uu usoo xaroodo, halka Inter Milan iyo AS Roma ay sarre u qaadeen dhaqaalaha usoo xarooda, laakiin AC Milan ayaa hoos u dhacday.
Wargeyska La Gazzetta dello Sport ayaa soo saaray natiijada dhaqaale ee kooxaha horyaalka Talyaaniga ka dib markii ay Real Madrid ugu sarre martay kooxaha uu dhaqaalaha ugu badan usoo xarooday xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ee 2013 ilaa 2014, iyadoo ku dhawaaqday dakhli dhan 603 milyan oo euros.
Juventus ayaa ugu sarreya horyaalka Italy iyadoo uu usoo xarooday adduun lacageed dhan 270 milyan ilaa 280 milyan oo euros, waxayna heli doontaa 50 milyan oo euros oo dheeraad ah haddii ay kasoo baxdo wareega group-ka UEFA Champions League.
Madaxweynaha cusub ee Inter Milan Erick Thohir ayaa sheegay in ujeedkiisa ugu weyn uu ahaa inuu sarre u qaado dakhliga usoo xarooda kooxdiisa wuxuuna u muuqdaa inuu ku guuleystay, ka dib markii ay Inter sarre ugu kacday 190 milyan oo euros.
Laakiin kooxda ay sida weyn u colaadtamaan ee Milan ayaa hoos u dhacday, Rossoneri ayaa waxaa usoo xarooday 200 milyan ilaa 210 milyan oo euros maadaama aysan xilli ciyaareedkaan ka muuqan tartamada Yurub.
Napoli ayaa dareemeysa xanuunka dhaqaale ee ay leedahay in laga haro Champions League, ka dib markii ay play-offka ku reebtay Athletic Bilbao, waxayna ka qeyb geleysaa Europa League, waxaana la filayaa inuu dakhligeedu noqdo 120 milyan ilaa 130 milyan oo euros.
Taasi waxay la micno tahay inay Naples 50 milyan oo euros hoos uga dhacday xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay, halka Roma ay soo baxday Champions League, sidaas darteed dhaqaalaha usoo xarooday ayaa lagu qiyaasayaa inuu sarre ugu kaco 175 milyan ilaa 180 milyan oo euros.
Verona ayaa ah kooxda ugu yaabka badan kooxaha yaryarka Talyaaniga, iyadoo uu usoo xarooday dhaqaale dhan 50 milyan oo euros, halka Empoli oo ugu hooseysa Serie A ay heleyso 25 milyan ilaa 30 milyan oo euros haddii aysan horyaalka ka harin.
La Gazzetta ayaa sidoo kale daabacday warbixin ay ku magacaabeyso kooxaha deymaha lagu leeyahay ee horyaalka Serie A.
Inter ayaa lagu yeeshay 74 milyan oo euros xilli ciyaareedkii 2012-13, iyadoo qiimahaas uu inta badan laba jibbaarmay, Udinese oo kaalinta labaad fadhisa ayaana lagu leeyahay 40 milyan oo euros. AC Milan ayaa lagu leeyahay 26 milyan oo euros, Roma ayaa qabta deyn dhan 23 milyan oo euros, halka Juventus ay qabto 15 milyan oo euros, Napoli ayaana ah kooxda ugu deynta yar iyadoo lagu yeeshay 10 milyan oo euros.